सार्वजनिक ठाउँमा सिल्पाको पाइन्ट फुस्केपछि यसरि ट्रोलको सिकार भइन ! – Hot Post News
सार्वजनिक ठाउँमा सिल्पाको पाइन्ट फुस्केपछि यसरि ट्रोलको सिकार भइन !
एजेन्सी फिल्म बाजीगरबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको एक तस्विरले सामाजिक संजाल तातेको छ । उनि सोहि तस्विरका कारण यतिबेला ट्रोलको सिकार भएकी छिन् । उक्त तस्विरमा उनि एक हातमा छाता र अर्को हातले आफ्नो जिन्स पाइन्ट समाउँदै गदै अबस्थामा देखा परेकी छिन् । बेला बेलामा चर्चामा आउने उनि अहिले पनि कम्मर भन्दा ठूलो जिन्स लगाउका कारण चर्चा र ट्रोल बनिरहेकी छिन् ।
उनले लगाएको त्यो पहिरनलाई उनका फ्यानले मजाक उडाएका छन् । हुनत उनलाई ट्रोल हुनु खासै ठुलो कुरा भने पक्का पनि होइन् । हरेक अभिनेत्रीको नक्कल गरेर पनि उनि मजाक बनिरहेकी हुन्छिन् । हालै शिल्पाले लगाएको कम्मर भन्दा ठूलो जिन्सले गर्दा उनलाई हम्मे हम्मे भएको छ ।
Prevसिल्पालाई के भयो ? हस्पिटलमा यस्तो अवस्थामा भेटीइन्
Nextविदेश पठाउँदा लागेकाे पैसा नतिरेकाे भन्दै म्यानपावरका एजेन्टले डोजर लगाएर भत्काइदिए गरिवको घर !